LX1 ဘက်လိုက်မှုအလင်းရောင် CRI 95 6500K Simulated D65 အဖြူရောင်ဘက်လိုက်မှုအလင်းများ - MediaLight ဘက်လိုက်မှုအလင်းရောင်
MediaLight & LX1 အရှည်ဂဏန်းတွက်စက်
သင့်ဖန်သားပြင်များအတွက် မှန်ကန်သောအရွယ်အစားဘက်လိုက်အလင်းရောင်ကို ဆုံးဖြတ်ရန် အောက်ပါသင့်လျော်သောရွေးချယ်မှုများကို ရွေးချယ်ပါ။
16:9 (ပြသမှုအများဆုံး) 21:9 (UltraWide)
မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားက ဘယ်လောက်လဲ (ဒါက သူ့ရဲ့ ထောင့်ဖြတ်တိုင်းတာမှုရဲ့ အရှည်)
ဖန်သားပြင်၏3သို့မဟုတ်4ထောင့်တွင် မီးများကို ထားလိုပါသလား (ကျွန်ုပ်တို့၏ အကြံပြုချက်ကို ဤစာမျက်နှာတွင် ဖတ်ရှုပါ။ MediaLight & LX1 အရှည်ဂဏန်းတွက်စက် ဆုံးဖြတ်ရန်အခက်အခဲရှိလျှင်)။
ဤသည်မှာ လိုအပ်သော အမှန်တကယ် အရှည်ဖြစ်သည်။
ဤအရွယ်အစားဘက်လိုက်အလင်းအထိ လှည့်ပတ်သင့်သည် (အမှန်တကယ်နှင့် လုံးဝန်းသောတိုင်းတာမှုများသည် အလွန်နီးကပ်နေပါက သင့်ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း လှည့်ပတ်နိုင်သည်။ များသောအားဖြင့် အလွန်နည်းသည်ထက် ပိုကောင်းသည်)။
MediaLight Mk2 စီးရီး
Mk2 နေကြတ် 1m
MediaLight Mk2 ကြိုး ၂၄ Volt
MediaLight Mk2 မီးသီး
စံပြ Lume Pro စားပွဲမီးခွက်
LX1 ဘက်လိုက်အလင်း (၁ မီတာ)
LX1 ဘက်လိုက်အလင်း (၂ မီတာ)
MediaLight & LX1 ရဲ့ခြားနားချက်ကဘာလဲ။
MediaLight Pro2 (1 မီတာ)
MediaLight Pro2 (2 မီတာ)
MediaLight Pro2 (3 မီတာ)
MediaLight Pro2 (4 မီတာ)
MediaLight Pro2 (5 မီတာ)
MediaLight Pro2 (6 မီတာ)
လှံနှင့် Munsil UHD HDR စံနှုန်း
လှံနှင့် Munsil HD စံနှုန်း
Harkwood န်ဆောင်မှုများ, Ltd Sync-One2 v2
HomeTheaterHiFi.com (MediaLight ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း)
HomeTheaterHiFi.com (LX1 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း)
ငါ့ MediaLight ဘက်လိုက်မီးများဘယ်လောက်တောက်ပသင့်သလဲ။
LX1 ကို MediaLight Mk2 နှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်း
သင့် TV အတွက် မှန်ကန်သော ဘက်လိုက်အလင်းမှိန်စက်ကို ရွေးချယ်နည်း
PWM-sensitive တစ်ဦးချင်းစီအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ dimmer များကို မိတ်ဆက်ပေးခြင်း။
အဘယ်ကြောင့် MediaLight ကို Amazon တွင်မရောင်းသနည်း။
ငါ့ TV အတွက်ဘက်လိုက်မီးလုံးအရှည်ဘယ်လိုလဲ။
ပွင့်လင်း Box ကို Deals
အာမခံ & ပြန်လာ
MediaLight ၅ နှစ်အာမခံ
Wi-Fi Dimmer ပြဿနာများ
Sony Bravia ကိစ္စများ
Vizio တီဗီနှင့် Soundbar အဝေးထိန်းထိန်းချုပ်ရေးဆွေးနွေးမှုပြIssနာများ
ကျွန်ုပ်၏ LG တီဗီတွင် USB 2.0 port များသာရှိသည်
MediaLight Mk2 ဘက်လိုက်မှုအလင်းရောင်တပ်ဆင်ခြင်း
ပင်မစာမျက်နှာ LX1 ဘက်လိုက်မှုအလင်းရောင် CRI 95 6500K Simulator D65 White Bias Lights
LX1 ဘက်လိုက်မှုအလင်းရောင် CRI 95 6500K Simulator D65 White Bias Lights
မူလစျေးနှုန်း $24.95 - မူလစျေးနှုန်း $58.95
မူကွဲတစ်ခုကိုရွေးပါ အပိုသေးငယ်သော (၁ မီတာ) / ခလုတ်မှေးစက် (+ $ 1) - $ ၁၄.၉၀ အပိုအသေး (1 မီတာ) / အနီအောက်ရောင်ခြည်အဝေးထိန်းခလုတ် မှိန်စက် (+$2.00) - $21.95 အလွန်သေးငယ်သော (၁ မီတာ) / MagicHome WiFi Dimmer (+ $ 1) - $ ၁၈.၉၀ အပိုအသေး (1 မီတာ) / မှိန်စက်မရှိ (ငါ့မှာ ကိုယ်ပိုင်မီးမှိန်စက် ရှိသည်) (-$5.00) - $14.95 အသေးစား (2 မီတာ) / ခလုတ်ကိုမှိန် (+ $ 0.00) - $ 24.95 အငယ် (2 မီတာ) / အနီအောက်ရောင်ခြည် ရီမုတ်ကွန်ထရိုးမှိန်စက် (+$2.00) - $26.95 အသေးစား (၂ မီတာ) / MagicHome WiFi Dimmer (+ $ 2) - $ 4.00 အသေး (2 မီတာ) / မှိန်စက်မရှိ (ငါ့မှာ ကိုယ်ပိုင်မီးမှိန်စက် ရှိသည်) (-$5.00) - $19.95 အလယ်အလတ် (3 ​​မီတာ) / ခလုတ်မှေးစက် (+ $ 0.00) - $ 29.95 အလယ်အလတ် (3 ​​မီတာ) / အနီအောက်ရောင်ခြည် ရီမုတ်ခလုတ် မှိန်စက် (+$2.00) - $31.95 အလယ်အလတ် (3 ​​မီတာ) / MagicHome WiFi Dimmer (+ $ 4.00) - $ 33.95 အလယ်အလတ် (3 ​​မီတာ) / မှိန်စက်မရှိ (ငါ့မှာ ကိုယ်ပိုင်မီးမှိန်စက် ရှိသည်) (-$5.00) - $24.95 အကြီးစား (4 မီတာ) / ခလုတ်ကိုမှိန် (+ $ 0.00) - $ 34.95 ကြီးမားသော (4 မီတာ) / အနီအောက်ရောင်ခြည် ရီမုတ်ကွန်ထရိုးမှိန်စက် (+$2.00) - $36.95 ကြီးမားသော (မီတာ ၄ လုံး) / MagicHome WiFi Dimmer (+ $ ၈.၉၅) - ဒေါ်လာ ၃၃.၉၀ ကြီးမားသော (4 မီတာ) / မှိန်စက်မရှိ (ငါ့တွင် ကိုယ်ပိုင်မီးမှိန်စက် ရှိသည်) (-$5.00) - $29.95 အလွန်ကြီးမားသော (၅ မီတာ) / ခလုတ်မှိန် (+ ၄.၉၅) - ဒေါ်လာ ၃၄.၉၀ အပိုကြီး (5 မီတာ) / အနီအောက်ရောင်ခြည် ရီမုတ်ခလုတ် မှိန်စက် (+$2.00) - $41.95 အလွန်ကြီးမားသော (၅ မီတာ) / MagicHome WiFi Dimmer (+ $ 5) - $ 4.00 ပိုကြီး (5 မီတာ) / မှိန်စက်မရှိ (ငါ့မှာ ကိုယ်ပိုင်မီးမှိန်စက် ရှိသည်) (-$5.00) - $34.95 အပိုအကြီးစား (၆ မီတာ) / ခလုတ်မှိန် (+ ၄.၉၅ ဒေါ်လာ) - ဒေါ်လာ ၃၉.၉၀ အပိုပိုကြီးမားသော (၆ မီတာ) / အနီအောက်ရောင်ခြည်အဝေးထိန်းခလုတ် (+$6) - $2.00 အပိုအလွန်ကြီးမားသော (၆ မီတာ) / MagicHome WiFi Dimmer (+ $ ၈.၉၅) - $ ၄၃.၉၀ အပိုပိုကြီး (၆ မီတာ) / မှိန်စက်မရှိ (ငါ့မှာ ကိုယ်ပိုင်မီးမှိန်စက် ရှိသည်) (-$6) - $5.00
အလွန်သေးငယ်သော (၁ မီတာ) အသေးစား (၂ မီတာ) အလတ်စား (၃ မီတာ) ကြီးမားသော (၄ မီတာ) အလွန်ကြီးမားသော (၅ မီတာ) အပိုအကြီးစား (၆ မီတာ)
ခလုပ်နှိပ် (+ $ 0.00) အနီအောက်ရောင်ခြည်အဝေးထိန်းခလုတ် မှိန်စက် (+$2.00) MagicHome WiFi Dimmer (+ $ ၈.၉၅) မှိန်စက်မရှိပါ (ကျွန်တော့်မှာ ကိုယ်ပိုင် မှိန်စက် ရှိပါတယ်) (-$5.00)
1234567 8910 + အရေအတွက်
Facebook ပေါ်မှာဝေမျှမယ် တွစ်တာပေါ်မှာ Tweet LinkedIn တို့အပေါ်ဝေမျှမယ် Pinterest အပေါ် pin
ကျေးဇူးပြုပြီးမှတ်သားထားပါ: အခြေခံဈေး မြင့်လာပါပြီ။ ပါဝင်သည် အဝေးထိန်းခလုတ်မဟုတ်သော မှိန်စက်၊ သို့သော် LX1 စျေးနှုန်းများ မတက်ပါ။ သင့်ကိုယ်ပိုင်ထောက်ပံ့နေပါက dimmer ရွေးချယ်မှုကို ဖယ်ရှားနိုင်ပါက ၎င်းသည် စျေးနှုန်းမှ $5 ကို နုတ်ယူမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ ဘက်လိုက်မီးများအားလုံးကို မှိန်စက်ဖြင့် တပ်ဆင်သင့်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ရွေးချယ်မှုများအားလုံးကို ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ကြောင်း အတည်ပြုထားသည်။ LX1 ဖြင့်ဝယ်ယူသောအခါ၊ LX2 အတွက် 1 နှစ်အာမခံသည် dimmer နှင့်သက်ဆိုင်သည်။
ဘဏ်ကိုမချိုးဖျက်နိုင်သော ရည်ညွှန်းအရည်အသွေးအလင်းရောင်ကို သင်ရှာဖွေနေပါသည်။
LX1 ကို The MediaLight ၏ထုတ်လုပ်သူများမှမိတ်ဆက်ပေးသည်။
တတ်နိုင်ပြီးအရည်အသွေးမြင့်မားသောဘက်လိုက်မှုဆိုင်ရာအလင်းရောင်ကိုရှာဖွေခြင်းသည်မည်မျှစိတ်ရှုပ်စရာကောင်းသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိသည်။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ LX1 Bias Lighting ကိုအင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒါကစျေးနှုန်းချိုသာပြီးတိကျတဲ့ဘက်လိုက်မှုအလင်းရောင်။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြိုင်ဘက်တိုင်းထက်သာလွန်ပြီးကုန်ကျစရိတ်သက်သာတယ်။
အကောင်းဆုံးကတော့သင်တတ်နိုင်သောအရည်အသွေးအတွက်သင်စွန့်လွှတ်စရာမလိုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထင်ရှားသော MediaLight ဘက်လိုက်မှုအလင်းရောင်အားအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်အချို့ကိုပြောင်းလဲခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စက်မှုလုပ်ငန်းစံသတ်မှတ်ချက်များထက်သိသိသာသာကျော်လွန်သောအရည်အသွေးမြင့်ဘက်လိုက်မှုအလင်းကိုတီထွင်နိုင်ခဲ့သည်။
MediaLight သည်ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအတွက်စက်မှုလုပ်ငန်းစံသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်စတူဒီယိုတိုင်းနီးပါးတွင်အသုံးပြုခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အလွန်တိကျသောတိကျမှုအတွက် colorists များကယုံကြည်ကြသည် - သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည် MediaLight ၏စျေးနှုန်းမြင့်မားခြင်းကြောင့်အိမ်တွင်းရုပ်ရှင်ရုံကိုဘယ်တော့မှမချိုးဖောက်ခဲ့ပါ။ အခုချိန်အထိ။
သင်၏ကိုယ်ပိုင် living ည့်ခန်းတွင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဆင့်အလင်းရောင်ရှိသည်ဟုခံစားရသည်ကိုယခုသင်တွေ့ကြုံခံစားနိုင်သည်။ LX1 Bias Lighting ဖြင့်သင်ဒါရိုက်တာမှရည်ရွယ်ထားသည့်အတိုင်းတိကျသောအရောင်များဖြင့်ရုပ်ရှင်များကိုကြည့်ရှုနိုင်မည်။ တီဗွီရှိုးများသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုများကိုကြည့်ရှုသောအခါသင်ပိုမိုသဘာဝအသားအရေသံကိုခံစားနိုင်သည်။ တဖန်သင်တို့ဂိမ်းသို့ရောက်နေ? LX1 ထည့်သွင်းထားသောဂိမ်းများသည်မည်မျှပိုကောင်းမည်ကိုသင်မယုံနိုင်ပါ။
ဒီအင်္ဂါရပ်များ MediaLight နှင့်အခြားဘက်လိုက်မှုအလင်းအိမ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပုံကိုအံ့ ering ခြင်း? နှိုင်းယှဉ်မှုအတွက်ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ။
• 6500K (ISF သည်တိကျမှန်ကန်မှုရှိခြင်း)
•အရောင်ပြန်ဆိုအညွှန်းကိန်း (CRI) 95
•Spectro အစီရင်ခံစာ (.PDF)
USB 3.0 ဖြင့်သင်၏ TV သို့ဆက်သွယ်နိုင်သည် (၁ မီတာမှ ၄ မီတာမှတိုတောင်းသော USB 1 နှင့်အလုပ်လုပ်သည်)
•အကန့်အသတ်မရှိသောဆက်သွယ်မှုနှင့် Controller ရွေးချယ်မှုများအတွက် USB နှင့် DC connectors
•ပါဝါ cable ကို 15 လက်မပါဝင်သည်။ (အကယ်၍ သင်၏ USB port သည်အစွန်းနှင့်ဝေးကွာနေပါက extension cable လိုအပ်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အတည်ပြုထားသော ၀.၅ မီတာဒေါ်လာကို ၇.၉၅ ဒေါ်လာကမ်းလှမ်းသည်။ တစ်ခုကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့၏ MediaLight Mk0.5 Flex နှင့်အခကြေးငွေမယူပါ။ )
•ပြည့်စုံသောဘက်လိုက်မှုအလင်းရောင်စနစ်ဖန်တီးရန် LX1 ကို dimmer (သီးခြားစီရောင်းသည်) နှင့်တွဲထားပါ
4.9 200 ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များပေါ်တွင် အခြေခံ.
ပြန်လည်သုံးသပ်တင်ပြဘို့ Thank you!
သင့်ရဲ့ input ကိုအလွန်တန်ဖိုးထားသည်။ သူတို့လည်းပျော်မွေ့နိုင်အောင်သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူမျှဝေပေးပါ!
စီဓာတ်ပုံများနှင့်အတူ အများစုမှာလတ်တလော အမြင့်ဆုံးခဲ့သည် Rating နိမ့်ဆုံးခဲ့သည် Rating အများစုမှာအကူအညီ
Clear ကို filter ကို
အလတ်စား (၃ မီတာ) / ခလုတ်မှေးစက် (+ $ 3)
Share | Facebook က • တွစ်တာ
ဒီထောကျအကူပွုခဲ့သလော00
ပိုမိုကောင်းမွန်သော ထုတ်ကုန်ကိုပင် ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
wifi မှိန်စက်ဖြင့် MK2 bias lighting ကို မှာယူခဲ့သည်။ ပစ္စည်းရောက်ရင်2ရက်အတွင်းရောက်ရင် အရမ်းမြန်တယ်။ wifi မှိန်စက်တွင် ပြဿနာရှိနေသည်၊ ပံ့ပိုးကူညီမှုမှ မှိန်စက်အသစ်တစ်ခုကို ချက်ချင်းထုတ်ပေးသည်။ အပြစ်ကင်းစင်စွာ အလုပ်လုပ်ပြီး ဘက်လိုက်အလင်းရောင်သည် မှောင်နေသောအခန်းတွင် ရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုခြင်းအတွေ့အကြုံကို တိုးစေသည်။ ကြီးစွာသောဝယ်ယူမှုနှင့် ဖောက်သည်၏ပံ့ပိုးမှုကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းပေးသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ ဤကဲ့သို့သောပံ့ပိုးမှုမျိုးကို မကြာခဏမတွေ့ရတော့ပါ။ Bias Lighting ကို ထပ်ဝယ်တော့မှာ သေချာတယ်။ ကျေးဇူးပါ။
အလွန်ကြီးမားသော (၅ မီတာ) / MagicHome WiFi Dimmer (+ $ 5)
မီးရောင်တွေနဲ့ အရမ်းပျော်တယ်။ ၎င်းတို့နှစ်ဦးကို ကျွန်တော်ဝယ်ခဲ့ပြီး၊ မှိန်စက်များထဲမှ တစ်ခုသည် ကျွန်ုပ်၏အခန်းရှိ အခြားစက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုနှင့် တူညီသော IR ကုဒ်များ ပါရှိပြီး အရင်းအမြစ်များကို ပြောင်းလဲသည့်အခါ သို့မဟုတ် ပါဝါဖွင့်ထားသည့် ကိရိယာများကို ပြောင်းလဲသောအခါ LED များ မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ဖြစ်စေသည်။ ကျွန်ုပ်သည် ပံ့ပိုးကူညီရန် လက်လှမ်းမှီပြီး အလွန်ကောင်းမွန်သော ဝန်ဆောင်မှုကို ရရှိခဲ့ပါသည်။ ကုန်ပစ္စည်းရော ဝန်ဆောင်မှုရော ကျေနပ်ပါတယ်။
အလတ်စား (၃ မီတာ) / MagicHome WiFi Dimmer (+ $ ၈.၉၅)
ဤမီးလုံးများသည် တူညီသောစျေးဖြင့် ဝယ်ယူထားသော သာမန်စတိုးဆိုင်များထက် အဆတစ်သန်း ပိုကောင်းပါသည်။ ထို့အပြင် သင့်တွင်မေးခွန်းတစ်ခုရှိလျှင် Jason သည် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ တုံ့ပြန်မည်ဖြစ်ပြီး အလွန်ဖော်ရွေသည်။ ပြီးခဲ့တဲ့လ နှစ်လလောက်က ကျွန်တော် မှာထားတာ နှစ်စုံရှိတယ်။
ကြီးမားသော (၄ မီတာ) / အနီအောက်ရောင်ခြည် ရီမုတ်ဖြင့် ထိန်းချုပ်မှုမှိန်စက် (+$4)
အမြန်ပို့ဆောင်ခြင်း၊ အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပြီး အလုပ်အလွန်ကောင်းသည်။ သူငယ်ချင်းတို့လည်း ရအောင်ယူဖို့ အကြံပြုပါရစေ။
Clear ကို filter များ
မူပိုင်ခွင့်© 2022 MediaLight ဘက်လိုက်မှုအလင်းရောင်။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု (USD $)
အာဖဂန်နစ္စတန် (AFN ?)
အော်လန်ကျွန်းစု (ယူရို €)
အယ်လ်ဘေးနီးယား (ALL L)
အယ်လ်ဂျီးရီးယား (DZD د.ج)
အင်ဒိုရာ (ယူရို €)
အင်ဂိုလာနိုင်ငံ (USD $)
အန်ဂွီလား (XCD $)
ဂွါ & ဘာဘူဒါ (XCD $)
အာဂျင်တီးနား (USD $)
အာမေးနီးယား (AMD နံပါတ်။)
ယူးဘား (AWG ƒ)
တက်ကြွကျွန်း (SHP ပေါင်)
သြစတြီးယား (ယူရို €)
အဇာဘိုင်ဂျန် (AZN ₼)
ဘဟားမား (BSD $)
ဘာရိန်း (USD $)
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ (BDT ৳)
ဘယ်လာရုစ် (USD $)
ဘယ်လ်ဂျီယမ် (ယူရို €)
ဘီနင် (XOF Fr)
ဘာမြူဒါ (USD $)
ဘူတန် (USD $)
ဘိုလီးဗီးယား (BOB Bs.)
ဘော့စနီးယား & ဟာဇီဂိုဗီးနား (BAM КМ)
ဘော့ဆွာနာ (BWP P)
ဘရာဇီး (USD $)
ဗြိတိန်နိုင်ငံကအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာနယ်မြေတွေကို (USD $)
ဘရူနိုင်း (BND $)
ဘူလ်ဂေးရီးယား (BGN лв.)
ဘူရွန်ဒီ (BIF Fr)
ကမ္ဘောဒီးယား (KHR R)
ကင်မရွန်း (XAF Fr)
ကိပ်ဗာဒီ (CVE $)
ကာရစ်ဘီယံနယ်သာလန် (USD $)
ဗဟိုအာဖရိကသမ္မတနိုင်ငံ (XAF Fr)
ချဒ် (XAF Fr)
ချီလီ (USD $)
တရုတ်နိုင်ငံ (CNY ¥)
ကိုးကိုစ် (ကီးလင်) ကျွန်းများ (AUD$)
ကိုလံဘီယာ (USD $)
ကော်မ္မရိုဇ့် (KMF Fr)
ကွန်ဂို - ကွန်ဂိုသမ္မတနိုင်ငံ (XAF Fr)
ကွန်ဂို - ကင်ရှာဆာ (CDF Fr)
ကော့စတာရီကာ (CRC ₡)
ခရိုအေးရှား (HRK kn)
ကူရကာအို (ANG ƒ)
ဆိုက်ပရပ်စ် (ယူရို €)
ဒိန္းမတ္ (DKK kr.)
ဂျီဘူတီနိုင်ငံ ( DJF Fdj )
ဒိုမီနီ (XCD $)
အီကွေဒေါနိုင်ငံ (USD $)
အဲဂုတ္တုပြည်၌ (EGP ج.م)
အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ (USD $)
အီကွေတာဂီနီနိုင်ငံ (XAF Fr)
အီရီထရီးယား (USD $)
အက်စ်တိုးနီးယား (ယူရို €)
အီသီယိုးပီး (ETB တောင်ယာ)
ဖောက်ကလန်ကျွန်းစု (FKP ပေါင်)
ဖရိုးကျွန်းစု (DKK kr.)
ဖီဂျီ (FJD $)
ဖင်လန် (ယူရို €)
ပြင်သစ် (ယူရို €)
ပြင်သစ်ဂီယာနာ (ယူရို €)
ပြင်သစ်ပိုလီနီးရှား (XPF Fr)
ပြင်သစ်တောင်ပိုင်းနယ်မြေ (ယူရို €)
ဂမ်ဘီယာ (GMD D)
ဂျာမနီ (ယူရို €)
ဂါနာ (USD $)
ဂျီဘရောလ် (GBP ပေါင်)
ဂရိနိုင်ငံ (ယူရို €)
ဂရင်းလန်း (DKK kr.)
နေးဒါ (XCD $)
Guadeloupe (ယူရို €)
ဂွာတီမာလာ (GTQ Q)
ဂါဇီး (GBP ပေါင်)
ဂီနီနိုင်ငံ (GNF Fr)
ဂီနီဘစ် (XOF Fr)
ဟေတီ (USD $)
ဟွန်ဒူးရပ်စ် (HNL L)
ဟောင်ကောင် SAR (HKD$)
ဟန်ဂေရီ (HUF Ft)
အိုက်စလန် (ISK kr)
အိႏၵိယ (INR ₹)
အင်ဒိုနီးရှား (IDR Rp)
အီရတ် (USD $)
အိုင်ယာလန် (ယူရို €)
လူသား၏ကျွန်း (GBP ပေါင်)
ဣသရလေ (ILS ₪)
အီတလီ (ယူရို €)
ဂျမေကာ (JMD $)
ဂျပန် (JPY ¥)
ဂျာစီ (USD $)
ယော်ဒန်မြစ် (USD $)
ကင်ညာ (KES KSh)
ကီရီဘာတီ (USD $)
ကိုဆိုဗို (ယူရို €)
ကူဝိတ် (USD $)
ကာဂျစ္စတန် (KGS som)
လာအိုနိုင်ငံ (LAK ₭)
လတ်ဗီးယား (ယူရို €)
လေဗနုန်တော (LBP ل.ل)
လီဆိုသို (USD $)
လိုက်ဘေးရီးယားနိုင်ငံ (USD $)
လစ်ဗျားနိုင်ငံ (USD $)
လီချင်စတိန်း (CHF CHF)
လစ်သူ (ယူရို €)
လူဇင်ဘတ် (ယူရို €)
မကာအို (MOP P)
ဒါဂတ်စကာ (USD $)
မာလာဝီ (MWK MK)
မေလးရွား (MYR RM)
မော်လ်ဒိုက် (MVR MVR)
မာလီ (XOF Fr)
မော်လ်တာ (ယူရို €)
မာတီနစ် (ယူရို €)
မောရစ်ရှ (MUR ₨)
မာယော့တ် (ယူရို €)
မက္ကစီကို (USD $)
မော်လ်ဒိုဗာ (MDL L)
မိုနာကို (ယူရို €)
မွန်ဂိုလီးယား (MNT ₮)
မွန်တီနီဂရိုး (ယူရို €)
မွန်ဆာရတ် (XCD $)
မော်ရိုကို (MAD د.م.)
မိုဇမ်ဘစ် (USD $)
မြန်မာ (မြန်မာနိုင်ငံ) (MMK K)
နမီးဘီးယား (USD $)
နီပေါ (NPR ₨)
နယ်သာလန် (ယူရို €)
နယူးကယ်လီဒိုးနီးယား (XPF Fr)
နီကာရာဂွာ (NIO C$)
နိုင်ဂျာ (XOF Fr)
နိုင်ဂျီးရီးယား (NGN ₦)
Norfolk ကျွန်း (AUD$)
မြောက်အမေရိကမက်ဆီဒိုးနီးယား (MKD ден)
ေနာ္ေဝး (USD $)
အိုမန် (USD $)
ပါကစ္စတန် (PKR ₨)
ပါလက်စတိုင်းနယ်မြေ (ILS ₪)
ပနားမား (USD $)
ပါပူဝါနယူးဂီနီနိုင်ငံ (PGK K)
ပါရာဂွေး (PYG ₲)
ပီရူး (PEN S/.)
ဖိလစ္ပုိင္ (PHP ₱)
ပိုလန် (PLN zł)
ပေါ်တူဂီ (ယူရို €)
ကာတာနိုင်ငံ (QAR ر.ق)
Réunion (ယူရို €)
ရဝမ်ဒါ (RWF FRw)
ဆာမိုအာ (WST T)
ဆန်မာရီနို (ယူရို €)
ဆောပိုလိုဆောင်ထမေ & ကျောင်းအုပ်ကြီး (STD Db)
ဆော်ဒီအာရေဗျ (SAR ر.س)
ဆားဘီးယား (RSD РСД)
ဆီယာရာလီယွန် (SLL လဲ့)
စိန့်မာတင် (ANG ƒ)
ဆလိုဗက်ကီး (ယူရို €)
ဆလိုဗေးနီး (ယူရို €)
ဆော်လမွန်ကျွန်းစု (SBD $)
ဆိုမာလီယာ (USD $)
တောင်အာဖရိက (USD $)
တောင်ပိုင်းဂျော်ဂျီယာ & တောင် Sandwich ကကျွန်းစု (GBP ပေါင်)
ေတာင္ကုိးရီးယား (KRW ₩)
တောင်ပိုင်းဆူဒန် (USD $)
စပိန် (ယူရို €)
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ (LKR ₨)
စိန့်ဘာသယ်လဲမီ (ယူရို €)
စိန့်ဟယ်လီနာ (SHP ပေါင်)
စိန့်ကစ် & နေးဗစ် (XCD $)
စိန့်လူစီယာ (XCD $)
စိန့်မာတင် (ယူရို €)
စိန့် Pierre ၏ & မီကွီလွန် (ယူရို €)
စိန့်ဗင်းဆင့် & ဂရိ (XCD $)
ဆူဒန် (USD $)
ဆူရာနမ် (USD $)
Svalbard & ဇန်နဝါရီ Mayen (USD $)
ဆြီဒင္ႏုိင္ငံ (SEK kr)
ဆွစ်ဇလန် (CHF CHF)
ထိုင်ဝမ် (TWD $)
တန်ဇန်းနီးယား (TZS Sh)
ထုိင္းႏုိင္ငံ (THB ฿)
အရှေ့တီမော (USD $)
တိုဂို (XOF Fr)
အဘိဓါန် Tokelau (NZD$)
Tonga (ထိပ်တန်း T$)
ထရီနီဒက် & တိုဘာဂို (TTD$)
ထရစ်စ da Cunha (GBP ပေါင်)
တူနီးရှား (USD $)
ကြက်ဆင် (USD $)
တာ့ခ်မင်နစ္စတန် (USD $)
တူရကီ & ကိုင်းကော့စ်ကျွန်းများ (USD $)
အမေရိကန်ပြင်ပကျွန်းများ (USD $)
ယူဂန်ဒါနိုင်ငံ (UGX USh)
ယူကရိန်း (UAH ₴)
အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု (AD د.إ)
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း (GBP ပေါင်)
ဥရုဂွေး (UYU $)
ဗာနူအာ (VUV Vt)
ဗာတီကန်စီးတီး (ယူရို €)
ဗင်နီဇွဲလား (USD $)
ဗီယက်နမ် (VND ₫)
Wallis & Futuna- (XPF Fr)
အနောက်တိုင်းဆာဟာရ (MAD د.م.)
ယီမင် (YER ﷼)
ဇမ်ဘီယာ (USD $)
ဇင်ဘာဘွေ (USD $)
** total_quantity ** | ** unit_price ** / ** ယူရန်မီတာ **